Kalma fotsiny a !
Miarahaba e ! Misimisy ihany ry Jean izay taratasy nosoratana teto izay fa ny omaly tsy niova ihany ny eto amin’ny tanàna a !
Taratasin’i Jean Iza no handeha aloha ?
Miarahaba anao aho ry Jean amin’izao ankatoky ny fiafaran’ny taona izao. Hitanao amin’izao ary fa tonga ihany ity ilay fotoana an ! Hitako efa mangovitra mihitsy ianareo vao mahita soratra 8 marina.
Tsy tianareo hiriaria eny rehetra eny izahay fa hoe manala baraka anareo mianakavy. Izao indray ianareo vao mody miova hevitra. Sao dia heverinareo fa safidinay ary izao ry Jean ? Ny nataonareo ihany anie no mahatonga anay hahantra sy lanaky ny fahantrana ka izao asainareo misitri-belona izao e ! Tena kofona sy kepoka mihitsy izahay iray tanàna amin’ity fihetsikareo ity a ! Te hampiseho mafy ianareo fa milamina sy madio ny tanàna ary sambatra ny vahoaka. Tianareo haseho amin-dry mena hoditra fa tsara voatra sy mirindra toy ny any Eoropa ilay Iarivo kely zary nataonareo fahirano. Fa mba manontany anareo izahay hoe inona moa no mba anjara adidy nataonareo tamin’ny vahoakan’Iarivo no ianareo no miseho azy handidy sy hanapaka eto ? Moa tsy ianareo aza no nijoro ho fahavalon’ilay ramatoa miezaka hatrany hampandroso ny tanàna a ? Raha mba nisaina kely ianareo ry Jean ka nitsinjo marina ity renivohitr’i Gasikara ity dia tsy nila nafenimpenina ny lesoka goavana eto a ! Sitrakay tokoa ny hiova sata sy tena handroso fa tsy hihaingo ambony tsikoko toa anareo ka aleo hifampitazana eto fa tsy misy miala eto e ! Samy tompon’ny tanàna isika ary izahay aza no tena tompony ka aza mifandidididy a !